काठमाडौ : दिनभरिको थ’कान र त’नावलाई हटाउने गजबको उपाय भुइँमा सुत्नु नै हो । भुइँमा सुत्दा मान’सिक शान्ति पाइन्छ, मन रमाउँछ र तनाव तथा थ’कान भाग्छ । बेस्सरी थाकेर पनि नि’द्रा लागेन भने तपाईं भुइँमा सुत्न थाल्नुस् ।
यसो गर्दा तपाईंलाई गजबको नि’द्रा लाग्छ र उठेपछि पनि थ’कान र टाउको दु’ख्नेको साटो ता’जापन अनुभव हुन्छ । शरीरको क्षमताअनुसार भु’इँमा सुत्न थाल्नुस् त । तपाईं कति आन’न्दित महसूस गर्नुहुनेछ ! कम्म’र दुख्ने समस्या अहिले आम समस्या भएको छ र जुनसुकै उमेरका मानिसलाई यसले सताउँछ । तपाईंमा पनि यो समस्या छ भने भु’इँमा सुत्न थाल्नुस् ।काँध र गर्दनमा पी’डा हुने समस्या आजकलका मानिसलाई खुबै हुन्छ ।
लगातार कम्प्युटरमा काम गर्ने, झु’केर हिँड्ने, सही पोजिसनमा नबस्ने र गल’त तरिकाले सुत्ने गर्दा यस्ता समस्या आउँछन् । काँ’धलाई सि’धा पार्न र गर्दन दुखेको निको पार्न पनि भुइँमा सुत्न थाल्नुस् । शरीरमा सही ‘ होस् भनी चाहनुहुन्छ भने भुइँमा सुत्न थाल्नुस् । यसो गर्दा शरीर दिमा’गको तालमेल सही बस्छ र स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ ।
तपाइकाे सुत्ने तरीका कतै गल’त त छैन ? जान्नुहाेस्
आरामको लागि नि’न्द्रा सबैभन्दा महत्व’पूर्ण हुन्छ । राम्रोसंग सुत्ने, राम्रो निन्द्रा लिने व्यक्ति शारीरिक तथा मा’नसिक थ’कानबाट मुक्त हुन्छ । यसले गर्दा ऊ स्वस्थ त हुन्छ नै, काममा पनि प्रभाव’कारिता बढ्छ । सुत्नु भन्दा पनि कसरि सुतेको छ र कत्तिको ग’हिरो नि’न्द्रा लिएको छ भन्ने कुराले यो नि’र्धारण गर्छ ।
विश्वका ४० प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्ति खुट्टा खु’म्च्याएर सुत्ने गर्छन् । यसरि सिधा नसुतेर खुट्टा खुम्चाउँदा घुं’डा दुख्ने समस्या आउँछ । त्यस्तै, यसरि सुत्दा ढाड पनि कु’प्रो पर्छ । यो तरिकाले नसुत्नु नै राम्रो हुन्छ । तर यदि त्यो बानी छुटाउन सकिंदैन भने घुं’डाको बीचमा सिरानी राखेर सुत्ने गर्नुपर्छ । यसरि सुत्दा ढाड पनि सिधा हुन्छ र घुंडा’को जो’र्नी दुख्ने समस्या पनि हुँदैन ।
हामीले खाएको खाना बायाँ भागमा हुन्छ । दायाँ तर्फ फर्किएर सुत्दा त्यो खाना बसेको ठाउँ खल’बलिन्छ । खाना छिटो पच्न थाल्छ र अम्ली’य प’दार्थ उत्पन्न हुन थाल्छ । बायाँ भागतर्फ फर्किएर सुत्दा हामीले खाएको खाना राम्रोसंग पच्छ, किनकी त्यो सही स्थानमा रहेको हुन्छ । त्यसैले गर्दा हाम्रो पा’चनशक्ति बढ्छ र पे’टसम्बन्धि समस्या पनि हट्छ । हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै
दायाँ र वायाँः तपाईं साईड फर्किएर सुत्नु हुन्छ भने ढाडमा त्यति चो’ट पर्दैन । वाँया फर्केर सुत्दा मु’टुको जल’नलाई घ’टाउँछ । त’सर्थ यो पो’जिसनमा सुत्नु स्वास्थ्यका लागि ला”भदायक हुन्छ । तर, दाँया फर्केर सुत्दा भने मु’टुको जल’न बढाउँछ । जर्नल अफ क्लि,निकल ग्या’स्ट्रोने, स्ट्रो’लोजीको अध्ययन अनुसार स्वस्थ वय’स्कलाई धेरै
खानेकुरा खान लगाई एकातिरमात्र फर्किएर सुत्न लगाइएको थियो । दायाँ फर्केर सुत्ने वयस्कहरुको शरिरमा एसिडको मात्रा उच्च देखिएको थियो । अमेरिकन जर्न’ल अफ ग्या’स्टो,नेट्रो’लोजीको अध्ययनमा पनि यस्तै निस्क’र्ष देखिएको थियो । गर्भ’वती महिला पनि दे’ब्रे फर्किएर सुत्दा रग’तको प्र’वाह निकै राम्रो हुन्छ ।
उ’त्तानो परेर सुत्नु
यदि तपाईं यो पो’जिसनमा सुत्नुहुन्छ भने तपाईको शरिरको तौल सन्तुलित हुन्छ । तपार्इंमा ढाड र घाँटीको खासै समस्या हँुदैन । घुँ’डामुनि शि’रानी राख्नु भयो भने तपाईको पछाडिको भाग अझ सिधा र स्वस्थ हुन्छ । यदि तपाई घु’र्नुहुन्छ भने तपाईं यो पो’जिसनमा सुत्न सक्नुहुन्छ ।
एउटाको ढा’डातर्फ फर्केर अर्को सुत्ने
यो सुताई अन्त’र्गत जोडी एउटै दिशतार्फ फर्कि’एको हुन्छ तर एकजना अर्कोको ढाडतर्फ फर्केका हुन्छन् । यो पो’जिसनले जोडी गतिशिल छ भन्ने दर्शाउँछ । एक अर्कामा विश्वास र समझधा’रीको संकेत गर्ने यो पो’जिसन सबैभन्दा उपर्युक्त मानिन्छ । त्यसो त यौ’नका दृ’ष्टिले अतृ’प्त पा’र्टनर यो पो’जिसनमा सुत्ने से’क्स वि’ज्ञ ट्रे’सी को’क्स बताउँछन् ।
यो सुताईमा दुबै जना पार्टनर एउटै दिशात’र्फ फर्किएका हुन्छन् । एउटा पा’र्टनरका हात बेड र शिरानीमा हुन्छन् भने अर्काको कम्मरमाथि हल्का अँगालो मारेको अवस्थमा हुन्छ । झ’ट्ट हेर्दा एकले अर्कोलाई लखे’टेको जस्तो देखिन्छ । यस पो’जिसनले पार्ट’नर मध्ये एकले अर्कोलाई जीवनभर दुःख दिइरहेको सं’केत गर्छ ।
ढाड फ’र्काएर सुत्ने
यो पोजि’सनमा दुई जना विपरित दि’शातर्फ फर्किएर सुत्ने गर्छन् । एकले अर्काको ढाड छोएको हुन्छ । दुई ध्रुबमा फर्केर सुतेजस्तो देखिए पनि यो पो’जिसनमा सुत्ने जोडी एक अर्काप्रति प्रे’मभाव राख्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसले सुमधुर सम्बन्ध र नि’कटतालाई संकेत गर्छ ।
दुबै जोडी एक अ’र्कासँग अलिक अलग्एिर जस्तो यस्तो पोजि’सन पनि खासै नराम्रो नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । यो सुताइ पोजि’सनले जोडीहरु एक आपसमा विश्वास र सुरक्षित भएको संकेत गर्छ । त्यसले स्वतन्त्र’ताको पनि संकेत गर्ने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धमा दुबै जना नि’कट र स्व’तन्त्र महशुस गर्छन् । एक अध्ययन अनुसार २७ प्रतिशत बेलायती यो पो\_जिसन मन पराउँछन् ।
एक अर्काको हातपाखुरा जोडेर एकैतिर फर्केर सुतिने यो पो’जिसन निकै दुर्लभ मानिन्छ । यस अन्तर्गत जोडिले आफ्ना घुडा, औला, बुढीऔंला, जि’व्रो र अन्य अंग एक आपसमा जोड्न खोजेजस्तो देखिन्छ । बि’बाहको केही सातापछि प्राय जोडी यो पो’जिसनमा सुत्छन् ।
जोडिमध्ये एक जना उत्तानो परेर सुत्नु र अर्को भने उत्तानो पर्ने व्यक्तिको छातीमा टाँसिनु यो सुताईको विशेषता हो । उ’त्तानो पर्नेले आफ्नो छातीमा सुत्नेको कपाल छुन्छ भने महिलाले पुरुषको छा’तीमा औला राखेकी हुिन्छन् । प्राय नव’दम्पत्ति यसरी सुत्छन् । यसले प्रेम र बासना द’र्शाउँछ । एकअर्काको सामिप्यतामा दुई जना सुरक्षित र खुसी हुन्छन् ।
विपरित शिरा’नीमा सुत्नु
यो सुताई निकै खत’रानक अवस्थाको ल’क्षण हो । दुबैजना एकअर्कालाई पैताला फ’र्काएर उल्टो सुत्ने गर्छन् । निकै दु’र्लभ मानिने यो पो’जिसनले जोडिको सम्बन्ध सुमधुर छैन भन्ने संकेत गर्छ । यो पो’जिसनमा सुत्ने प्राय सबैको सम्बन्ध बिच्छेद हुनेगर्छ । यसबाहेक जोडीबीच बैम’नेश्यता, बा’दबि’बाद र यौन अस’न्तुष्टि तथा अ’विश्वासको संकेत गर्छ ।
ग’लत सुताइ र त्यसले नि’म्त्याउने समस्या
स्वस्थ शरीरका लागि नि’द्रा आवश्यक छ । नि’द्रा जति गहिरो भयो त्यति नै धेरै स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ । स्वस्थ शरीरका लागि ग’हिरो नि’द्रा मात्र प¥र्याप्त छैन, त्यसमा सुत्ने पो’जिसनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । गलत तरिकाको सुताइले विभिन्न सम’स्या हुने गर्छन् ।
प्रायः सबै मानिस रातीको समयमा एउटै पोजिसनमा सुत्ने गर्छन् । एउटै पोजिसनमा सुत्दा त्यसले स्वास्थ्यमा के असर पर्छ भन्ने कुरा धेरैले महसुस गरेका हुँदैनन् । जब कि कैयौं शारीरिक समस्या ग’लत सुताइकै कारण निम्तने गर्छ । विभिन्न अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने करिब ९५ प्रतिशत मानिस एउटै पोजिसनमा सुत्ने गर्छन् । सुताइमा गरिने थोरै फेरबदलले मात्र पनि छातीको जलन, अल्जा’इमर तथा पा’र्किन्सन्सजस्ता रो’गबाट जोगिन सकिने कुरा बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले जनाएको छ ।
गलत तरिकाको सुताइले छातीमा जलन तथा एसि’डीटीको समस्या पैदा हुनसक्छ । विशे’षगरी, सुत्नुभन्दा करिब २–३ घण्टा अघि चिल्लो, पी’रो खानेकुराको सेवन तथा खाए लगत्तै सुत्नाले पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ ।
यसबाट बच्नका लागि खाए लगत्तै दायाँतर्फ फर्केर सुत्नुपर्छ । पाचन प्रक्रि’यामा बा’धा उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि सिरानीमा अग्लो तकिया राख्नुपर्छ । दाहि’नेतर्फ कोल्टे परेर सुत्ने, दुवै हातलाई आरामदायी मु’द्रामा राख्ने र दुवै घुँ’डालाई हल्का मोडेर पनि छाती पोल्ने समस्यामा आराम पाउन सकिन्छ ।
आधुनिक जीव’नशैलीका कारण झण्डै ४० प्रतिशत व्यक्ति ढाड सम्बन्धी स’मस्याबाट ग्रसि’त छन् । गलत तरिकाको सुताइले पनि यो समस्या बढ्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता समस्याबाट राहत पाउन ढाडको ह’ड्डीलाई सीधा राख्न जरुरी छ । घुँ’डालाई हल्का मोडेर त्यसको बीचमा तकिया राखेर पनि ढाड दुख्ने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
काँ’ध दुख्ने समस्या
हरेक पटक एउटै पो’जिसनमा सुत्ने बानीले काँध दुख्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ । एकैतिर फर्केर सुत्दा काँ’ध दुख्ने स’मस्या भएमा अर्कोतर्फ फर्केर सुत्नुपर्छ । त्यसबाहेक, दुईटा घुँ’डाको बीचमा तकिया राखेर तथा उ’त्तानो परेर सुते पनि यो समस्यामा राहत पाउन सकिन्छ ।
२०७७ चैत्र ८, आईतवार २३:३८ गते 1 Minute 1140 Views